Paarkii Indaastirii Jimmaa Wiirtuu Qindeessaa Bunaa Gochuufi – Kichuu
HomeBusinessPaarkii Indaastirii Jimmaa Wiirtuu Qindeessaa Bunaa Gochuufi
Finfinnee, Eebila 16, 2011(FBC)-Paarkii indaastirii Jimmaa teeknooloojii fayyadamuun wiirtuu qindeessaa bunaa gochuuf hojjetamaa jiraachuu Ministeerri Innooveeshinii fi Teeknooloojii beeksiseera.
Buna dhiqamee, akaawwamee, daakamee fi saamsamee xumurame gurgurtaa elektiroonkisiin gara biyya alaatti erguu kan dandeesisu qophiin godhamaa kan jiru yoo ta’u, abbootiin qabeenyaa Chaayinaa dirree kana irratti akka bobba’aniif waamichi dhiyaachuufii Ministeerichi beeksiseera.
Mariin akkaataa buna hojjetamee xumurame Ityoophiyaa irraa gara biyyoota alaatti itti erguun danda’amu irratti xiyyeeffate Chaayinaa Beeyjiingitti gaggeeffamuunis ibsameera.
Marii sadarkaa idil addunyaatti dhaabbileen buna gurguran irratti hirmaatan kanarratti mootummaan Ityoophiyaa abbootii qabeenyaa dirree kanarratti bobba’aniif deeggarsa barbaachisu hunda kan taasisu ta’uu koomishineerri Koomishinii Invastimantii Ityoophiyaa obbo Abbabaa Ababaayyahu dubbataniiru.
Ministirri Ministeera Innooveeshinii fi Teeknooloojii Dooktar Injiinar Geetahuun Maakuryaa gama isaaniitiin hojii dirree qonnaa teeknooloojiin deeggaruun buna gurgurtaa elektiroonkisiin gara biyya alaatti erguu bira darbee gurgurtaa nageenyi isaa eegame gaggeessuuf Teeknooloojii Bilook Cheeyiin jedhamu gara hojiitti galchuuf akka hojjetamu dubbataniiru.
Hirmaatonni marichaas haalli mijataa Ityoophiyaa jiru maali akka fakkaatu irratti gaaffilee dhiyeessaniif deebiin gahaa kennamuufii odeeffannoon Ministeera Innooveeshinii fi Teeknooloojii irraa arganne ni mul’isa.
Diraamaa Abbaa Jaamboo Beektuu?